Archive du 20180308
Rajoelina sy ny “IEM” Nangina fa tsy nisy mpanaraka
Tsy hita popoka indray aloha i Andry Rajoelina taorian’ilay fampahafantarana ilay vina antsoina IEM “Initiative d’Emergence pour Madagascar”. Lany bala sy tapi-dalan-kaleha sahady ve ?
Malagasy 250 000 any ivelany Afaka hifidy amin’izay ve ?
Hifanotofan’ny mpanao politika Malagasy ny fanaovana fanambarana politika lehibe any ampitan-dranomasina. Tany Frantsa no nisantaran-dRajoelina ny fampahafantarana ilay IEM (Initiative d’Emergence pour Madagascar),
Fanonganam-panjakana 2009 Mamono vahoaka ny tarazony
Tsy fahalalam-pomba, tsy fanajana lehibe, fandikan-dalàna, tsy fanajana rafitra sy antanantohatra, anisan’ny tarazo navelan’ny fanonganam-panjakana nitranga tamin’ny taona 2009 avokoa ireo.
Sotasotaina Ravalomanana Na hanao politika, na hitantana ny Tiko
Orinasa isan’ny matanjaka ary na izao tontolo izao aza miaiky azy ny orinasan’ny filoha mpanorina ny antoko Tiako Madagasikara, Tiko.
Frantsay sy ny vondrona iraisam-pirenena Efa manomana ny kandidany
Atomotra ny fifidianana, ka samy manana ny kajiny ny mpanao politika, ary efa tafiditra ao anatin’izany io resaka gafy sy antsojay ataon’ny fanjakana HVM io.
Fitondrana petatoko Ny olony aza tsy voafehy mainka fa fanjakana
Tsy voafehy intsony ny fanjakana, ary afaka manao izay saim-patany ny mpitondra ambony amin’izao fotoana.
Zoma izao no mifarana ny fivoriana tsy ara-potoana eny amin’ny antenimieram-pirenena. Ilay momba ny volavolan-dalàna fehizoro momban’ny fifidianana no tena nandrasan’ny Malagasy saingy toa mbola tsy tonga eny akory izany.
Tranga eny anivon’ny fokontany Fanendahana sy ny adiady madinika no tena maro
Tsy misy izay tsy miaiky fa sahirana ny ankamaroan’ny tokantrano Malagasy. Zary mikorontana hatramin’ny fiaraha-monina vokatr’izany, antony mampitombo isa ireo karazana fitarainana eny anivon’ny Fokontany.
Association-Ntsika Nanolotra fanampiana ho an’ireo mpianatry ny CEG ao Toamasina
Mpianatra miisa 483 mianadahy avy amin' ny CEG miisa fito ao Toamasina I no indray notoloran' ny Association-ntsika dictionnaire Larousse maimaim-poana iray avy omaly noho ny fahazoan' izy ireo naoty ambony indrindra tamin’ny taom-pianarana 2016- 2017 farany teo .
Fankalazana ny 08 martsa nalefa mialoha Mampametra-panontaniana ny maro
Somary lasa aloha ny fankalazana ny datin’ny 08 martsa, andro maneran-tany ho an’ny vehivavy tamin’ity taona 2018 ity eto Madagasikara raha noharina tamin’ny taon-dasa.
Coupe de la Confédération 2018 Lavon’ny Fosa Juniors Madagasikara 2-0 ny Aspl 2000 Maorisy
Resin’ny ekipa Malagasy Fosa Juniors avy any Boeny tamin’ny isa 2-0 omaly tany amin’ny kianja Georges V any amin’ny nosy Maorisy ny ekipa Aspl 2000 solontenan’ity firenena ity teo amin’ny “2è tour”
8 martsa any Moramanga Alaotra Mangoro Vola an-tapitrisany no ho lanian’ny DG-n’ny orinasa Fanalamanga
Hanarina ny fahavoazana niseho tamin’ny fikarakarana ny 8 martsa tamin’ny taon-dasa 2017 noho ny nafitsoky ny rivodoza Enawo namely mafy tamin’izany andro izany ry zareo ao amin’ny Faritra Alaotra Mangoro ka hamerina ny fikarakarana ny hetsika ao Moramanga anio 8 martsa 2018.
Baolina kitra LIGUE 1 Analamanga Lavo ny andrarezina As Adema
Tontosa omaly alarobia 07 martsa 2018 tetsy Mahamasina sy tany Carion ny andro faha-4 ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga LIGUE 1 eo amin’ny taranja baolina Lalao miverin’ny andro faha-3 notontosaina ny alahady 4 martsa teo izy ireo.
Champions League any Eoraopa Manchester City 1 – Bâkle 2, Totteham 1 – Juventus 2
Manchester City 1 – Bâkle 2, Totteham 1 – Juventus 2. Ireo no vokatry ny lalao miverin’ny 1/8n-dalana notanterahina omaly alarobia alina tany Espagne sy tany Angletera ka nahatafakatra an’i Manchester City sy ny Juventus
Manao solomaso mainty mitondra fiara Tena tsy azo hatao fa mety hampidi-doza
Betsaka ireo mpamily lasa misatroka sy manao solomaso mainty tato ho ato rehefa mamily fiara. Voakasik’izany manokana ireo mpamily taxi-be nefa mitondra mpandeha marobe tokoa.
Fanapotehana ny AAA-Tiko Natao “soudure” ny vavahady rehetra
Raha fandeferana sy vahaolana no nandrasana tamin’ny fanjakana manoloana ny raharaha AAA-Tiko, dia vao mainka ny nifanohitra tamin’izany no setriny omaly.
-Hanatanteraka fitiliana ny aretina homamiadana maimaim-poana eto an-drenivohitra ny Foundation Akbaraly sy ny fikambanana Pachamama ny 12 ka hatramin’ny 17 Martsa ho avy izao. Fokontany efatra no hanaovany ilay hetsika dia ny Fokontany Manakambahiny,
Jeunes TIM Antananarivo-Renivohitra Mihetsika indray… amin’ny asa sosialy
Orinasam-panjakana Misedra fanapotehana ny ankamaroany
Tamin’ny 1997, orinasam-panjakana miisa 46 no tsy maintsy ho tantanan`ny tsy miankina ka isan’izany BTM, SOLIMA, SIRAMA…